धरानका मेयरको फोनमा गुनासो- खोइ पानी ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा तत्कालै पानी समस्या र समाधान एपिसोड-१
धरानका मेयरको फोनमा गुनासो- खोइ पानी ?
शनिबार पनि नभनी दिनहुँजसो पानीको मुहान चहार्दै मेयर, दुःख दिने नियतले पनि पानी आएन भन्ने गरेको पाइयोः मेयर साम्पाङ (भिडियोसहित)
धरानः धरान उपमहानगरबासीले नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसँग कस्तो गुनासो राख्लान् ? तर अझैपनि धरानमा खानेपानीकै विषयमा गुनासो पोख्ने गरेको पाइएको छ । मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफ्नो फेसबुक पेजमा पानीसम्बन्धी कुनै समस्या भएमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर मोबाइल नम्बर समेत दिएका छन् । त्यसमा अहिले धेरैजसो खानेपानीकै विषयमा गुनासो आउने गरेको पाइएको उनी बताउँछन् । अहिले खानेपानीकै विषयमा जनताले गुनासो राख्ने गरेको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् । दोस्रो कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित अधिकांश वडाध्यक्षले मेयर, उपमेयरसमक्ष पनि खानेपानीकै विषयमा जनताको गुनासो आएको सुनाउने गरेका छन् ।
खानेपानीकै लागि कुदेको कुदयै मेयर
हामी सबैले देखिरहेका छौं, मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) शनिबार दिनहुँजसो पानी, पानी भन्दै दौडिरहेको । उनी जुनसुकै कामका लागि फिल्डमै हुने गरेका छन् । यो साँचो पनि हो ।
विशेषतः खानेपानीको मुद्दाले नै चुनाव जितेका उनले खानेपानीलाई नै कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको कार्यपालिका बैठकमा समेत भन्ने गरेका छन् । गत शनिबार पनि उनी पानीकै लागि खटिरहेका थिए (भिडियोमा) । त्यतिबेलै पनि उनी फोनमा ‘पानीको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं’ भनिरहेका थिए ।
तत्कालै धरानबासीलाई कसरी सहजरुपमा खानेपानी वितरण गर्न सकिन्छ भनेर आफू लागिरहेको उनले बताएका छन् । उनले धरानका सर्दु, खर्दुलगायतका खोलामा पनि पानीको अवलोकनका लागि पुगिसकेका छन् भने एडिबी परियोजनाद्वारा सञ्चालित खानेपानी परियोजनाको पनि स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छन् ।
कोशीको पानी ल्याएर खुवाउने बाचा गरेका उनको निष्कर्ष छ– अहिले तत्कालै धरानबासीलाई कसरी पानी खुवाउन सकिन्छ भनेर दिनहुँजसो अवलोकनमा निस्किरहने । भन्छन्, ‘तत्कालै धरानबासी खानेपानी नपाएर तड्पिरहेका छन्, वडाध्यक्षहरु पनि त्यही कुरा लिएर आउँछन्, यसका लागि पनि म दिनहुँजसो पानीकै खोजीमा हुन्छु ।’ उनले धरानमा जति पनि मुहानबाट पानी आउँछ त्यहाँ पनि समस्या रहेको बताए । भन्छन्, ‘यही विषयमा मैले आन्दोलन गरें, जनताको एजेन्डा बोकें र चुनाव जितें तर अब जसरी पनि पानी खुवाउनुपर्छ भनेर लागिरहेकै छु ।’
उनी भइरहेकै संरचनाबाट ‘फुलफेज अप्रेसन नभएको र पानी नै भनेजति नआएको बताउँछन् । दुईवटा पम्प बिग्रिएको सात वर्ष भएको, मर्मत सम्भारमा ध्यान नपुगेको, पम्प जगेर्ना हुन नसक्नु, चारवटा पम्प चलाउनुपर्नेमा दुईवटा चलाइनु, मुहानमा सुधार हुन नसक्नु, मुहानबाट आधा मात्रै पाइपमा पानी बग्नु आधा बगेर जानु, वितरण प्रणालीमा पुरानाहरुलाई थाहा हुनु, नयाँलाई थाहा नहुनु आदि कारणले पनि अहिले धरानमा पानीको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको देख्छन् । ‘भएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्ने, मुहानको संरक्षण गर्ने, चुहावट रोक्ने र कडाइका साथ यहाँका कर्मचारीलाई पनि जवाफदेही बनाउने हो भने पानीमा तत्कालै समस्या नहुन सक्छ ।’ उनी थप्छन ।
उनले खानेपानी परियोजनाले भनेजति पानी ल्याउन नसकेको बताउँछन् । उनले यस विषयमा जानकारी लिन कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई पनि बोलाउने बताए ।
यसैबीच धरान–१४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले कार्यपालिका बैठकमै खानेपानीमा ट्याङ्कीमा कमिला कुदिरहेको भनेर आवाज उठाएका थिए । दुःखसुख गरेर ट्याङकी बनाएको तर पानी नआएर कमिला कुदिरहेको उनले बताएका थिए । ‘अहिले धरान–१४ मा भनेको बेला पानी आउँछ नत्र आउँदैन अवस्था यस्तो छ’, उनले कार्यपालिका बैठकमा भनेका थिए । कार्यपालिका बैठकको पर्सिपल्ट मेयर साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको टोली स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक राजु पोखरेल, मेयर, उपमेयरसहितको प्राविधिक समूह समेत स्थलगत अनुगमनमा गएको हो । उनीहरुले त्यहाँ खोनपानी समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ धन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
पहिले उपभोक्ताबाट निर्माण भएको खानेपानी ट्याङकीमा पानी सञ्चालन गर्ने विषयमा वडाध्यक्ष र स्थानीय उपभोक्ताहरुसँग प्राविधिकसहितको टोलीले छलफल गरेको जनाइएको छ । सो ट्याङ्कीबाट सवट्याक्की निर्माण गरी पानी नपुगेका घर घरमा खानेपानी पुरयाउने निर्णय भएको वडाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
पञ्चकन्या ट्याक्की डेढ लाख लिटर क्षमता छ, पञ्चकन्या जङ्गलमा बनेको रिर्जव टङ्कीमा पानी झार्ने गरी काम गर्न मेयर साम्पाङले निर्देशन दिएका छन् ।
खैरे खोलाको पानी समेत ल्याइने
मेयर साम्पाङसहितको टोलीले धरान–२० मा रहेको खैरे खोलामा पनि अवलोकन भएको छ । त्यहाँबाट पानी ल्याउँदा केही हदसम्म सहज हुने हुनाले आफूले त्यहाँबाट पानी ल्याउने योजना बुनेको बताए । ‘खैरेको पानी ल्याउँदा विवाद पनि हुन्छ भन्ने सुनेको छु’, उनले भने, ‘विवाद नहुने तरिकाले पानी ल्याउँछौं ।’ उनले त्यहाँबाट पानी ल्याउँदा जनतालाई दिएर सहरमा ल्याउने बताए ।
धरान–१२ का वडाध्यक्ष टंकबहादुर राई खानेपानीको समस्याका लागि पुराना कर्मचारीहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाउँछन् । ‘पुराना कर्मचारीहरुसँग धेरै टेक्निकल कुराहरु उहाँहरुलाई थाहा छ, पानी कहाँ कहाँ, कसरी वितरण गर्दा के हुन्छ भन्ने प्राविधिक कुराहरु थाहा छ, त्यसैले उहाँहरुलाई पनि डाकेर सहकार्य गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने ।
दुःख दिने नियतले पनि पानी नआएको गनासोसहितको फोन
मेयर साम्पाङले खानेपानीको सेवा सम्बन्धमा विशेष प्राथमिकता दिँदै मोबाइल नम्बर समेत दिएका थिए । उनले सेवाग्राहीलाई पानीको विषयमा तुरुन्तै गुनासो गर्नको लागि ९७६५४७८३५९, ९८१४३०८९०९ मा सम्पर्क गरी गुनासो दर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए । उनले बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म सो गुनासो गर्न भनेका छन् ।
दुःख दिने नियतले पनि ‘पानी आएन’ भनेर भन्दा दुःख लाग्ने गरेको मेयर साम्पाङले बताएका छन् । उनले कार्यपालिका बैठकमा सबै वडाध्यक्षसमक्ष गुनासो पोखे– केहीले त दुःख दिने नियतले पानी छैन भनेर फोन समेत गरेको पाइयो । यस्तो त गर्नुभएन नि ।
उनले जुन लोकेसनमा पानी आएन भन्ने गुनासो आएको त्यहाँ पुग्दा जसले फोन गरेको हो उसैले ‘मोबाइल स्वीचअप’ गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘मेरो मोबाइल फोनमा जतिखेर पनि पानी आएन भनेर गुनासो आइरहन्छ’, उनले थपे, ‘तर पानी नआएको लोकेसन दिनुहोस्, म अवलोकनमा आउँछु भन्दा लोकेसन पनि दिन्छन् तर त्यहाँ पुग्दा मोबाइल स्वीचअप गरेर लापत्ता हुने गरेको पनि देखियो, यसरी दुःख दिने नियतले त यस्तो कार्य गर्नुभएन नि ।’